Apple Inoburitsa iOS uye iPadOS 15.1 RC yeVagadziri | IPhone nhau
Apple Inoburitsa iOS uye iPadOS 15.1 RC yeVagadziri
Apple ichangotisiya isu takashama miromo mushure mekuratidzwa kweMacBook Pro nyowani neM1 Pro itsva uye M1 Max. Makomputa matsva anosvika kuzochinja nyika yekomputa zvakare ... Iyo M1 yatoshamisika, iwe uchaona iyo M1 Pro naMax. Asi hazvisi zvese zvichave Mac. Apple yanga ichidawo kuunza maAirPod matsva uye nyowani HomePods Mini, uye nezvose izvi vagadziri vane basa zvakare kubvira kuCupertino ingoburitsa iyo RC shanduro dzeIOS uye iPadOS 15.1. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe zvese zvese zveiyi nyowani vhezheni.
Sezvatinogara tichikuudza, idzi shanduro ndedzevagadziriIwo mavhezheni e beta ayo, kunyangwe iwo achisvika iyo Regedza Musarudzo vhezheni, achiri mabhatas. Uye kuburitswa kweshanduro idzi kune chirevo. munguva pfupi inotevera tichakwanisa kuona shanduro dzakagadzikana pane edu zvishandiso. iOS uye iPadOS 15.1 inounza kuvandudzwa kwemidziyo yedu pakati pedu yatinowana iyo SharePlay kudzoka, chiitiko chitsva chinotibvumidza daidza shamwari dzedu uye titaure navo nekuona mabhaisikopo kana kuteerera mimhanzi pamwechete. NaSharePlay, akagovaniswa playlists uye kuwiriranisa kwemaTV zvirongwa zvadzoka kuitira kuti vese vatori vechikamu vazvione panguva imwe chete.
Uye zvakare, kune vashandisi ve iPhone 13 Pro, iOS 15.1 inotiunzira rutsigiro rwekurekodha vhidhiyo muProRes (yakakwana yekugadzirisa pane yako nyowani M1 Max), inogumira ku30fps pa1080p pane zvishandiso zvine "chete" 128GB yekuchengetera (vamwe vanogona kurekodha mu4K); uye zvakare iyo mukana wekudzima Auto Macro kuve padyo kwazvo nezvinhu. Nhau dzinouyawo pamwe neyakajairika bug fixes izvo zvinoita kuti iOS 15 inyatso gadzikana. Iyo vhezheni yatinozoona mune yakagadzikana vhezheni svondo rinouya saka ramba wakatarisana sezvo isu tichizokuzivisa iwe nekukurumidza kana tichava nenhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple Inoburitsa iOS uye iPadOS 15.1 RC yeVagadziri
Chizvarwa chechitatu AirPod dzinoda iOS 3
Kuzivikanwa kwenzwi kwePodPod kunosvika muSpain neMexico munguva pfupi iri kutevera